Ikhaya Amasu we Forex Isu Lama Forex MACD Lichazwe Ngezibonelo
Isingeniso Samasu e-Forex MACD:
1 Isingeniso Samasu e-Forex MACD:
1.1 I Forex MACD Strategy Indlela:
1.1.1 Indlela: kwehlukana
1.1.2 When will we be going to use this divergence strategy?
1.1.3 Kunezinhlobo ezimbili zama-kwehlukana:
1.1.4 kwehlukana Positive ( izinto zizoshintsha bullish )
1.1.5 kwehlukana Negative ( izinto zizoshintsha bearish )
1.1.6 Amathiphu kwehlukana indlela
1.1.7 Ngini kwehlukana isibonelo emisebenzini:
1.2 I Forex MACD Strategy Indlela Kafushane:
1.2.1 Kunconywe Forex Ukuhweba Broker
Siyabonga kokufunda lokhu forex MACD isu blogpost futhi ngiyaqiniseka ukuthi uzofunda okuningi kule emfushane post iphuzu.
Njengoba wena konke kungenzeka uyazi, kahle MACD edingekayo kancane noma ngaphezulu zokufunda ijika futhi tutorials eziningi uthola zikhona akulula ukuba baqonde futhi ngenxa yalokho, kwesokunxele in ukudideka.
Ngiyavuma ukuthi MACD ungomunye walabo izinkomba enamandla eliye lanikeza cishe zonke yesikhulumi single Ukuhweba laphaya. Bheka, Angikwazi ekuqinisekisa ukuthi uzokwazi zokuthuthukisa ukusebenza kwakho Ukuhweba once lwenteke amandla MACD.
Kulo post, uzofunda isu kakhulu sendlela ukuze linqobe forex imakethe MACD. Into engcono kakhulu ngemva kokufunda lo mbiko, you should be able to implement the MACD strategies to your trading plan or system quickly.
Okokuqala, I ukukunika wayo nendlela ukusebenzisa izindlela. Okwesibili, Ngizokubonisa isibonelo sendlela sihlaziye emakethe nalezi zindlela.
***Amathiphu: Ungenciki le nkomba single sihlaziye emakethe. Qiniseka ukuhlanganisa nezinye analysis technical (noma isb. lwezibani, Fibonacci njll) sihlaziye ukunyakaza emakethe ukuhlunga ngabe nguluphi luhwebo namanga noma ukuphamba esiphezulu
*** Nazi amazwi engase sikukhubekisa ukudida kodwa ekugcineni nencazelo kuyafana:
I Forex MACD Strategy Indlela:
Lelisu idume ngempela MACD inkomba. Isu ingase yibe yinto exakayo abadayisi kakhulu.
Nasi ekuhlaziyeni ngempumelelo kangakanani kwehlukana:
Isikhathi esifushane: Scalper-Intraday
Abaningi signal elakhiwe
Isikhati eside: Swing Trader
Zimbalwa Signal akhiqiziwe
*** Isu kwehlukana linembile ngempela futhi kunembile ngisho nangokwengeziwe uma ubhekene ngidayisa i-term eside.
Shiya MACD setting ukuze okumisiwe (uma kwenzeka uma usebenzisa metatrader) uma kungenjalo, sebenzisa lokhu
Siya ukusebenzisa MACD histogram ukusebenzisa lelisu. I histogram sinquma umfutho futhi ngokusobala, ngemishini ijubane movement intengo.
Nini Siyakukwenza abazobamela ukusebenzisa lelisu kwehlukana?
A: Sizoba ukusebenzisa isu ukubona isibonakaliso emakethe izinto zizoshintsha. I- isitshengiselo zakuqala kakhulu– I ngempela sincamile!
Ungabona isignali ngaphambi kubuyekezwe kwenzekani bese umbona ngamehlo engqondo uma ubhekene ngidayisa for eside ... .grabbing 100-1000 Pips akakaze kube lula!
Kunezinhlobo ezimbili zama-kwehlukana:
1) Kwehlukana Positive - for bullish / signal emakethe ukuthenga
2) Kwehlukana Negative - for bearish / signal emakethe ukuthengisa
kwehlukana Positive ( izinto zizoshintsha bullish )
Lapho MACD ikhiqiza kuvumela ephakeme kanti intengo kwenza ongaphakeme ephansi.
Bona isibonelo ngezansi:
Phawula umahluko phakathi kwale mililo isiqondiso intengo kanye MACD.
Ngenxa yalokho isignali kwehlukana emihle, intengo ngokushesha ezihambayo up and ukuqagela ukuthi yini? 1000 inzuzo PIP lokho okubonayo lapha kuleli shadi emva kubuyekezwe.
kwehlukana Negative ( izinto zizoshintsha bearish )
I okuphambene kwehlukana emihle
Lapho MACD ikhiqiza highs ephansi ngesikhathi intengo kwenza highs ephakeme
Phawula umehluko phakathi isiqondiso MACD futhi intengo
I MACD sikhombisa a signal zakuqala kakhulu ngakho intengo ngokusobala mayelana nokuthoma ukutjhugulula kodwa bahlanganise ngaphambi kokwenza kanjalo.
Ngemva 5-12 lwezibani, emakethe ukuhlanekezela kunonophiswe kubuye Yini embi ngalo.
Amathiphu kwehlukana indlela
I MACD kwehlukana ikhombisa isignali zakuqala kodwa akusho ke uya ahoxise ikhandlela elilandelayo, it cishe ukuhlanekezela olandelayo 10 noma izinti ngaphezulu ngaphambi kokuya intengo ukuqhubeka nohambo yayo.
Yingakho ukuze uqiniseke njalo sebenzisa inhlanganisela nezinye analysis technical ngaphambi kokufaka sokuhwebelana ukuqinisekisa ngokwengeziwe lokhu.
Ngini kwehlukana isibonelo emisebenzini:
(1) EUR / USD , 4-ihora esibekelwe – kwehlukana omuhle
Nxa kwehlukana omuhle ubonisa ngenhla kwakha kushintsha EUR / USD pair kusukela bearish kuya bullish. Eduze Ne umugqa ovundlile, kukhona iphethini lwesibani esibizwa isando ukuthi uqinisekise ukuthi izinto zizoshintsha.( enye amathiphu extra)
(2) AUD / USD, 15 iminithi esibekelwe – kwehlukana negative
kwehlukana Negative on 15 imiz ishadi esibekelwe kwakha izinto zizoshintsha ethengisa.
(3) AUD / USD, 15 imiz esibekelwe - Another kwehlukana negative
Enye kwehlukana engemihle AUD / USD bhanqa ngesikhathi esisodwa abanqunyelwe sona.
(4) EUR / JPY, esibekelwe Daily -Positive kwehlukana
A Imiphumela omkhulu signal kwehlukana emihle njengoba nje kwakubikezelwe. Khumbula ayanda esibekelwe ayanda futhi killer inzuzo ungenza.
I Forex MACD Strategy Indlela Kafushane:
Ngakho-ke, nansi kuwuhlaka ukuthi uzabe enza ngale ndlela:
kwehlukana, 1) kwehlukana Positive 2) kwehlukana Negative
kwehlukana Positive = isignali bullish noma ukuthenga izinto zizoshintsha
kwehlukana Negative = isignali bearish noma ukuthengisa izinto zizoshintsha
Ngithemba wena ayekuthanda ukufunda lesi dlala iDemo, post elula ngendlela lula ukubulawa MACD inkomba. Ngifisa sengathi ngabe impumelelo best njengoba abadayisi! Ingabe share futhi uphawule uma uthanda lokhu!
Chofoza ukuze ulande le Bonus Free MACD “H-a-c-k”
Kunconywe Forex Ukuhweba Broker
Isiqephu esedluleForex Traffic Scalping Strategy
Isihloko esilandelayoMT4 Forex Spectrum Scalping Strategy
Okthoba 23, 2021
Okthoba 22, 2021
Izinkomba ze-Forex MT54313
Amasu we Forex1092
Amakomidi e-Forex - Okthoba 23, 2021 0